Abu Dhabi fizahan-tany dia manao fanentanana vaovao: andian-tantara tsy mahazatra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Abu Dhabi fizahan-tany dia manao fanentanana vaovao: andian-tantara tsy mahazatra
Septambra 7, 2018
Ny departemantan'ny kolotsaina sy ny fizahan-tany - Abu Dhabi dia nanohana ny varotra eran-tany tamin'ny fampielezana fanentanana vaovao iraisam-pirenena.
Ny departemantan'ny kolotsaina sy ny fizahan-tany - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) dia nanatsara ny toeran'ny varotra manerantany tamin'ny fanolorana hetsika fanentanana vaovao iraisam-pirenena lehibe. Ity hetsika farany ity dia hiorina amin'ny famantarana ny toeran'izay efa nahasarika vahiny marobe ho amiraly nandritra ny roa taona nifandimby ary hotohanan'ny fampitomboana ny fampanjariam-baovao manerantany manerana ny fantsona rehetra.
Ny tanjon'ity asa vaovao ity dia ny hanohizana ny fampahafantarana sy ny fahalianany any Abu Dhabi, ary hampitombo ny lazany ho fialam-boly tsy manam-paharoa, raharaham-barotra ary toeran-kolontsaina amin'ny fanamafisana ny hafatra momba ny traikefa mitaona fanahy sy 'tantara miavaka.'
Ny ivon'ity fampielezan-kevitra mivoatra ity dia ny fitambaran-tsarimihetsika vaovao mampiseho ny olona tena monina ao amin'ny emirata izay amin'ny alàlan'ny fomba fiainany manokana dia maneho ny toetrany sy ny halalin'ny tolotra omeny. Ireo olona ireo dia minia manao ny marina sy marina, mba hisaintsaina tsara an'i Abu Dhabi, ary haneho endrika mahagaga nefa mahavariana ao amin'ny toerana itodiana. Ny tarehin-tsoratra dia voafantina mba hifandray amin'ireo mombamomba ny mpitsidika sasany ary hampirisika ireo mpandeha hanatona an'i Abu Dhabi hamorona tantaran'izy ireo manokana.
Mba hampahafantarana ny zavatra niainany isan-karazany, ary hanasongadinana ny fahatsapana 'tontolo tena izy', ny roa amin'ireo horonantsary roa ireo dia ahitana an'i Fatema Al Hameli, 'Camel Whisperer' miakanjo tena ary ny vehivavy Emiratiana voalohany niditra tao amin'ny biby fiompiny. Varotra varotra rameva ao amin'ny firenena ary fanaovana fifaninanana hatsaran-tarehy, ary Theo Kekati, zatovo mitaingina sarety 'Rocket Boy', nahay tsara amin'ny toerana hahitana fahafinaretana sy fientanam-po.
Amin'ny alàlan'ny mason'ireto mpilalao ireto no ahitantsika amin'ny an-tsipiriany sy ny fahamarinana marina, ireo hetsika sy tantara mahatalanjona azon'i Abu Dhabi atolotra. Horonantsary roa hafa kosa no hanaraka aorian'ity taona 2018 ity, izay ahitana olona samihafa. Ho fanohanana an'ity atiny vaovao ity dia hisy paikadin'ny haino aman-jery nohavaozina sy mavesatra ary mifantina izay votoaty hita amin'ny firenena isaky ny firenena.
Raha nilaza ny heviny momba ilay fanambarana, HE Saif Saeed Ghobash, sekretera sekreteran'ny DCT Abu Dhabi, dia nilaza fa “Hetsika iray lehibe io amin'ny fanoloran-tenantsika hanolotra an'i Abu Dhabi ho toeran-tsoa manerantany. Ny fampidirana atiny video vaovao dia tsy isalasalana fa hanatsara sy hanampy mizana amin'ny fampielezan-kevitra efa nahomby ary hanamafy ny heriny amin'ny sehatra manerantany. ”
"Ny tanjonay dia ny hampivoatra ny fandefasan-kafatra mba hanomezana lalindalina kokoa ny tolotra ary hanakoako kokoa amin'ny fientanam-po sy amin'ny fomba mahomby amin'ireo olona kendrenay."
Steve Copestake, talen'ny Executive Marketing an'ny DCT Abu Dhabi, dia nanampy hoe: "Faly izahay fa afaka milaza an'izao tontolo izao ny atao hoe Abu Dhabi. Betsaka ny zavatra tokony ho hita sy traikefa amin'ny emirate, saingy fantatsika fa ireo mpitsidika mihoatra ny taloha dia mitandrina amin'ny hyperbole ary te-hamolavola ny fifandraisan'izy ireo manokana amin'ny toerana itodiana. Amin'ny alàlan'ireto tarehin-tsoratra ireto, amin'ny alàlan'ireto 'feo' ireto, ny tanjonay dia ny hanome sosokevitra sy hanangana fifandraisana tena misy sy lalindalina kokoa, hahitana ny tena izy, hanome aingam-panahy ireo tantara izay hozaraina ary hitsidika izay haverimberina. ”
Ny “A Series of Extra mahazatra Stories” an'ny DCT dia azo zahana manerantany ary manomboka ny 1 septambra.